Fiainana mpanakanto :: Naverin’ny mozika tany an-tsekoly ireo valo lahy teny an-dalambe • AoRaha
Pejy manokana • Zavakanto
Fiainana mpanakanto Naverin’ny mozika tany an-tsekoly ireo valo lahy teny an-dalambe
Nampientam-po ny maro rehefa niparitaka tany amin’ny tambazotran-tseraseram-pifandraisana hatrany ampitan-dranomasina ny feon’izy valo mirahalahy mpihira teny amoron’arabe. Nandeha ny fotoana ka tafaverina an-tsekoly indray ireto mpihiran’ny “zaza kanto” ireto ankehitriny. Miresaka ny fiainan’izy ireo ny mozika sy ny fandratoana fianarana ry zalahy ireto. Ampahafantariny ihany koa ireo nofinofiny hafa, taorian’izao nahafahany mianatra izao indray.
Avy amin’ny fianakaviana sahirana avokoa izy valo lahy mandrafitra ny Zaza Kanto, na ireo ankizilahy nanana feo miavaka ary azo horonantsary rehefa nihira teny an-dalambe. Toy ny zaza Malagasy maro dia voatery nandao ny sekoly izy ireo satria tsy ampy ny fidiram- bolan’ny ray aman-dreniny mba nahafahan’ izy ireo nandranto fahalalana araka ny tokony ho izy.
« Efa nisy tamin’ireo ankizy ireo no nianatra teny amin’ny EPP tety amin’ny manodidina anay tety Isotry tety. Noho ny fahasahiranana dia tsy afaka nanohy fianarana intsony izy ireo », hoy Rasamison, raibe mikololoko azy ireo. Araka ny fanazavana azo dia Randriamampionona Gérard, filoha lefitry ny Komitin’ny Fampihavanam-pirenena (KFM) rantsana Antananarivo , no nampahafantatra azy mirahalahy ireto tao anatin’ilay hira « Antson’ny Fihavanana ».
Na dia nisy aza ny ezaka nataony niaraka tamin’ireo mpanakanto maromaro niaraka taminy dia mbola niverina nihira an-dalambe ihany izy valo lahy. Niara-nisalahy tamin’ny famerenana an-tsekoly azy ireo ny pasitera Lova avy ao amin’ny FJKM Anjanahary ary ny ekipan-dRajery Valiha. Iray volana izao no mianatra toy ny ankizy tsara vintana rehetra ry zareo.
Efa talenta nolovaina tamin’ireo ray aman-dreny tany aloha kosa ny fihirana ka manaraka azy valo lahy eny foana. Manana fandaharana manokana ireo mpiandraikitra azy ireo mba tsy hisian’ny fifanoherana eo amin’ny fianarana sy ny maha mpanakanto. Rajery no miahy azy ireo amin’ny tontolon’ny mozika sy ny kolontsaina. « Mifanampy amin’ny talenta ny fahaizana. Tsy azo atao ambanin-javatra noho izany ny fianarana », hoy hatrany Rasamison.
Mbola mihira eny an-dalambe
Mampidi-bola isan’andro ry zalahy ireto, fony nihira teny an-dalambe satria betsaka ireo mpandalo no nandatsaka rakitra ho fankasitrahana ny talenta sy ny kanto nataon’izy valo lahy. Mitombo ny nofinofy ankehitriny rehefa mitohy ny fianarana. Tsy manadino ny niaingany kosa izy ireo, hany ka rehefa tsy misy ny famerenan-kira isaky ny sabotsy sy alahady dia mbola miverina eny an-dalambe eny ihany mitady « vola kely », araka ny filazan’ny sasany amin-dry zareo.
Ankoatra ny ho lasa mpihira malaza izay nofinofy iraisan’izy rehetra, dia misy koa ny mieritreritra ny hanana asa mendrika. Fahasoavana lehibe mihitsy no nandraisan’izy ireo ny fahafahana mandia fianarana indray. Taoriana kelin’ny nampalaza azy valo mirahalahy ireto dia samy nanonofy ny hiverenana any an-tsekoly indray izy ireo sady samy nanana ny faniriany momba an’izay asa tian’izy ireo hatao any aoriana any. Niova ireo nofinofy ireo ankehitriny.
Jimmy (16 taona)
Izy no mpiangaly feo fahaefatra tokana ao amin’ny tarika sady zokiny indrindra amin’izy valo miarahalahy. Manana
fahamatorana kokoa izy ary mikasa ny ho lasa mpanamory fiaramanidina. Talohan’ ny nandaozany ny sekoly dia nanonofy ny ho lasa mpitsabo izy. Isan’ireo tsy nianatra intsony i Jimmy ka hafaliana tsy nisy toy izany ho azy ny fiverenana tany an-tsekoly.
« Mahafinaritra be koa ny fandraisan’ny ankizy rehetra tany am-pianarana», hoy izy sady velom-panantenana ny amin’ny hananany ho avy mamiratra.
Tojo (14 taona)
Fanirian’ity ankizilahy ity mihitsy ny mba hiverina hianatra. Vao mainka hamafisiny amin’izao fandehanany an-tsekoly izao indray ny faniriany ho mpitsabo any aoriana any. Tsy avelany kosa ny maha mpihira azy fa ezahany ny hampivady azy amin’ny fianarana. Te hitovy amin’ny ankizy rehetra izy. Mirana lalandava ny endrik’i Tojo raha nilaza fa mahafinaritra azy ny any am-pianarana sy ireo namana vaovao azony. Ankoatra ny feo mangany dia mahafehy ny fivelesana ampongabe izy.
Tahiry (14 taona)
Tonga dia feo manga, miavaka ary mampangorintsina no mampiavaka an’i Tahiry, andrin’ny tarika Zaza Kanto ary mpiangaly feo faharoa sy fahatelo. Mitsikitsiky lava ity ankizilahy ity no somary be hanihany ihany koa. Ny ho toy ireny mpanakanto malaza maneran-tany ireny no faniriany. Mihevitra ny hampianatra ihany koa izy amin’izao fiverenany any am-pianarana izao. « Ny sabotsy sy alahady no natokana ho an’ny mozika sy ny famerenana samihafa. Mila mianatra amin’izay mba ho tafita », hoy izy. Tena hahafinaritra azy ny angatahan’ireo mpiara-mianatra hira isaky ny fakan-drivotra sy rehefa mirava avy mianatra.
Rija (14 taona)
Milomano tanteraka ao anatin’ny kanto izy satria ankoatra ny mihira dia mahafehy ny sodina sy amponga ihany koa. Ho azy, ny ho lasa mpanakanto malaza no tanjona tsara indrindra. Milofo tanteraka amin’ ny fianarana toa an’ireo namany izy. « Mety mbola hiova ny asa hataoko any aoriana any. Mbola mila mianatra be aloha dia ho hita eo. Fa tsy maintsy hanao mpihira aho », hoy ny tovolahy. Ny feo voalohany no tena talentany, izay ihany koa no anjara toerany ao amin’ny Zaza Kanto.
Njato (12 taona)
Isan’ireo niala an-daharana tamin’ny fianarana izy rehefa nankamamy ny fiaraha- mihira tamin’ireo namany teny an-dalambe, nampian’ ireo tranga tao an- tokantrano. Manana vinavina ny hampi- anatra ity ankizilahy, indray andro any, rehefa tafita soa aman-tsara. Efa fony fahakeliny no liana tamin’ny kanto sy mozika ary manam-paniriana ny hanohy izany hatrany i Njato. Manampy ny feo voalohany ao amin’ny Zaza Kanto izy.
Haitra (10 taona)
Anisan’ny zandriny indrindra ao amin’ny tarika i Haitra. I « Baina » no iantsoan’ireo namany azy. Ny ho lasa mpitsabo no mba iriany nefa te ho tonga « mpanakanto malaza» miaraka amin’ny tsiky malefaka. Miangaly ny feo voalohany sy fahatelo izy ao amin’ny tarika. Nandrisika azy hihira ny fahitana ireo namany nihirahira tao an-tanàna. Raiki-tahotra izy raha vao hiakatra sehatra voalohany tamin’ilay seho tetsy amin’ny IFM Analakely. Efa zatra kosa, hono, izy ka mitovy amin’ilay teny an-dalambe ihany izany amin’izao fotoana izao.
Thierry (10 taona)
Tsy miaraka mianatra amin’izy fito mirahalahy i Thierry. Tsy tazana matetika ihany koa izy satria raha ny fanazavan-dRasamison dia any Ampitatafika no fonenany ary eny ihany koa izy no mianatra. Izy irery no tsy niala ny fianarana mihitsy na dia nihira teny an-dalambe niaraka tamin’ireo namany aza. Hiatrika ny fanadinana CEPE ny zazalahy. « Manana faniriana izahay ny hampiaraka mianatra azy valo mirahalahy rehefa vita ity taom-pianarana ity », hoy hatrany Rasamison.
Rivo (12 taona)
Hanao polisy hono i « Gôva » na i Rivo noho ny fahitany ny zava-mitranga mikasika ny tsy fandriam-pahalemana eo amin’ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao. Milofo fatratra izy any am-pianarana. Manampy azy ny fandraisan’ ireo mpiara-mianatra azy tsy misy fanavakavahana. Ankoatra ny fihirana dia mampaneno korintsana ihany koa izy. Manana fahamatorana kokoa i Rivo raha ampitahaina amin’ireo namany.
Rafi-pampianarana vaovao :: Hanaovana tombana ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana amin’ny jona
Fifidianana solombavambahoaka :: Velona sahady ny fanoherana vokatra hiteraka savorovoro